Tuesday November 30, 2021 - 17:17:49
Xubno katirsan dowladda Federaalka iyo siyaasiyiin horay xilal ugasoo qabtay nidaamyada cumallada ah ee ka jira Soomaaliya ayaa ka qeylla dhaamiyay hadal ictiraaf ahaa oo dhowaan kasoo yeeray Oday dhaqameed caan ah.
Boqor Buur Madoow oo kamid ah oday dhaqameedyada ugu caansan gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ku qiray in wilaayaadka Islaamiga ah ee dalka ka jira ay yihiin dowlad aan ladafiri karin.
Isagoo ka hor hadlayay wasiirro iyo xildhibaanno katirsan dowladda Farmaajo ayuu ka shanqariyay awoodda ay Al Shabaab ku leedahay dalka Soomaaliya.
Markii uu hadalkaas kasoo yeeray Boqor Buur Madoow waxaa afka furtay mas'uuliyiin katirsan DF-ka kuwaas oo ka carooday hadalka oday dhaqameedka ee qiraya saameynta maamul iyo siyaasadeed ee wilaayaadka islaamiga ah.
Nin lagu magacaabo Cali Yare oo ah guddoomiye ku xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir aadna ugu dhow Farmaajo ayaa si cara leh uga jawaabay dhawaqii Buur Madoow wuxuuna ugu baaqay shacabka Muqdisho in aysan martiqaad usameyn oday dhaqameedka.
Axmed Macallin Fiqi oo ah xildhibaan horayna usoo noqday wasiirka amniga Galmudug iyo taliyaha sirdoonka DF-ka ayaa isna muujiyay sida uu ula maroor dillaacay in oday dhaqameed caan ah uu dowlad ku sifeeyo Al Shabaab.
Caradu intaas kuma ikaan ee doodda ku saabsan caddeymaha Boqor Buur Madoow ayaa qabsatay baraha bulshada, taageerayaasha dowladda ayaa aad udhaleeceeyay hadalka kasoo yeeray oday dhaqameedka qaarkood ayaaba ku baaqay in laga eryo magaalada Muqdisho.
Yuusuf Garaad oo katirsan DF-ka ayaa isna cambaareeyay qiraalka Buur Madoow ee ah in Soomaaliya ay ka jirto awood islaami ah oo dowlad udhiganta islamarkaana aan la dafiri karin.
Nuxurka hadalka Buur Madoow.
dhawaqa kasoo yeeray ninkan oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee lagu tiriyo in uu la shaqeeyo maamullada shisheeyaha ku daaban wuxuu DF-ka iyo xulufadeeda dabadhilifyada ah uga dhignaa Fallaar wadnaha uga dhacday sababtoo ah wuxuu Buurmadoow maxfal siyaasi ah ka qiray awoodda ay Shabaabul Mujaahidiin ku leedahay dalka Soomaaliya.
Awooddan Islaamiga ah ee uu Buurmadoow ka hadlay ayaa ah awood aan la dhayelsan karin oo hore ay siyaasiyiin badani uga qeylla dhaamiyeen, waxaan ugu weynaa dhawaqii kasoo yeedhay wasiirkii hore ee waxbarashada Dawladda Federaalka Goodax Barre oo sheegay in jihaadiyiintu ay Soomaaliya la wareegi doonaan haddii sidaan lagu sii socdo.
Maamullada Soomaalida ayaa ah kuwo dabadhilifyo u ah shisheeye heer awoodda xarakadu ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa. Boqor Buur-Madow ayaa u muuqda nin ay ku kacday duufaan siyaasadeed isaga oo markii horena xurguf siyaasadeed soo kala dhex gashey madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi.